Ny Huawei Mate 30 dia mivarotra singa iray tapitrisa ao Shina | Androidsis
Ny Huawei Mate 30 dia mivarotra singa iray tapitrisa ao anatin'ny telo ora
Ny faritra Huawei Mate 30 dia natolotra herinandro mahery lasa izay. Famaranana vaovao izay mamela antsika hiova maro, fa amin'ny tranga any Eropa dia miteraka olana lehibe, satria tsy manana rindranasa Google na fidirana amin'ny Play Services. Eo am-pamahana ity olana ity, ireo telefaona ireo dia efa natomboka tany Sina, misy valiny tsara.
Satria toa mazava fa misy fahalianan'ny mpanjifa ao Shina amin'ireo Huawei Mate 30 ireo. Ka farafaharatsiny mba fantatry ny marika fa afaka miankina amin'ny tsena anatiny ny mitondra ny varotra an'ity fianakaviana vaovao finday ity.
Tao anatin'ny adiny telo fotsiny dia efa nisy namandrika singa iray tapitrisa mahery amin'ny Huawei Mate 30, amin'ireo maodely roa, any Shina. Noho izany, misy ny fahalianana amin'ity faran'ny marika marika sinoa ity. Ho fanampin'izay, vitany ny mampihoatra an'io fomba io ireo tarehimarika azon'ny P30 enim-bolana lasa izay.
Ny marika dia manana fanantenana be amin'ity sehatra ity, satria manantena ny hivarotra 20 tapitrisa eo ho eo izy ireo amin'ny telefaona roa. Ka io fanombohana tsara any Shina io dia azo antoka fa fampisondrotana. Ankoatry ny famaritana mazava fa manana ny fanohanan'ny tsenam-pireneny izy ireo.
Na dia ny fanontaniana mipetraka dia hoe hanana ireo fahombiazana andrasan'ny orinasa eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ve ireo Huawei Mate 30 ireo. Ny tsy fisian'ny rindranasa Google ary ny tsy fahazoana antoka ny amin'ny mety hahafahana mametraka azy ireo amin'ny telefaona, dia zavatra mety handanjalanja ny fandefasana azy ireo. Fa ny marika dia miasa amina vahaolana ankehitriny.
Izany no antony mbola hiatrehantsika herinandro vitsivitsy fantaro izay hitranga amin'ny Huawei Mate 30. Telefaona mamela antsika izy ireo fiasa vaovao maro mahaliana, Tsy azo lavina izany. Ny olana dia ny lanjan'ny fananana ny Play Store sy ny Google fampiharana afaka mavesatra loatra amin'ity tranga ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Ny Huawei Mate 30 dia mivarotra singa iray tapitrisa ao anatin'ny telo ora
Sony dia hampiasa Snapdragon 865 amin'ny dingana farany manaraka
Ahoana ny fomba hisorohana ny YouTube amin'ny Android tsy handany angona finday